Oi! သည် punk rock ၏မျိုးခွဲဖြစ်ပြီး ၁၉၇၀နောက်ပိုင်းတွင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းမှစတင်ခဲ့သည်။ ဂီတနှင့် ဆက်နွယ်သော ယဉ်ကျေးမှုတွင် punks, skinheads နှင့် working class youth တို့ကိုယူဆောင်ခဲ့သည်။ Oi! ရွေ့လျားမှုသည် သိမြင်နားလည်မှုကို တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်း punk rock ဖြစ်ရပ်အစောပိုင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများဖြစ်သည်။ The Press တီးဝိုင်းမှာ Andre Schkesinger သည် oi! မျှဝေခဲ့သည်မှာ folk ဂီတမှ ဆင်တူမှုများတို့ဖြစ်သည်။
Oi! သည် ၁၉၅၀ နောက်ပိုင်းအပိုင်းတွင် အသိအမှတ်ပြုသော အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ punk rock ၏ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းမှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ hardcore punk ကို လွှမ်းမိုးစေခဲ့သည်။ အသံများကို ရောစပ်ထားသည့် အစောပိုင်း punk တီးဝိုင်းများမှာ Sex Pistols, the Ramones, The Clash နှင့် The Jam လွှမ်းမိုးမှုများနှင့် ၁၉၆၀ ဗြိတိန် rock တီးဝိုင်းများမှာ Small Faces နှင့် The Who, Football Chants နှင့် pub rock တီးဝိုင်းများမှာ Dr.Feelgood, Eddle and the Hot Rods နှင့် The 101ers နှင့် glam rock တီးဝိုင်းများမှာ Slade နှင့် Sweet တို့ဖြစ်သည်။ Oi!သည်လည်း အဓိက skinhead – oriented အမျိုးအစားမှ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်ဟု ယူဆနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ပထမဆုံး Oi!တီးဝိုင်းများမှာ punk rocker များနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ လူများသည် skinhead သို့မဟုတ် punk label တပ်ဆင်ထားသည်။
ပထမမျိုးဆက်စပ်သစ် Oi! တီးဝိုင်းများမှာ Sham 69 နှင့် Cock Sparrer တို့ဖြစ်ပြီး Oil မပေါ်ခင်က နှစ်အကြာခန့်က သူတို့၏ဂီတကို အသီးသီးဖော်ပြခဲ့သည်။ Cockney Reject ၏ ပေါင်းထည့်မှုအရ အခြားတီးဝိုင်းများ Oil ဟု အတိအလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤအမျိုးအစား၏ အစောပိုင်းနေ့များတွင် Angelic Upstarts, The 4-Skins, The Business, Anti-Establishment, Blitz, The Blood နှင့် Combat 84 တို့ပါဝင်သည်။
ပျံ့နှံ့နေသော original Oi! ရွေ့လျားမှုများသည် ကြမ်းတမ်းသော အလုပ်သမားတော်လှန်ရေး အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာသားများထဲတွင် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခြင်း၊ အလုပ်သမား မှန်ကန်ရေး၊ ရဲများ၏နှောင့်ယှက်မှုများနှင့် အခြား အာဏာပိုင်များ အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှုများအကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ထားသည်။ Oi!သီချင်းများသည် လမ်းတွင် အကြမ်းဖက်မှုများ၊ဘောလုံး၊ လိင်နှင့် အရက်များပါဝင်သည်။
အချို့ Oi! ၏ဝါသနာအိုးများတွင် အဖြူရောင်အမျိုးသားရေး အဖွဲ့အစည်းများမှာ National Front (NF) နှင့် British Movement (BM)၊ Oil မှ ရာထူးမှချခဲ့သည့်မျိုးခွဲမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားရေးဝါဒီဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ တီးဝိုင်းများ မူရင်း Oi!နှင့် မဆက်နွယ်ပေ။ ဖြစ်ရပ်သည် racism သို့ Far-right Politics တို့သည် တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ တစ်ချို့ Oi!တီးဝိုင်းများမှာ Angelic Upstarts, The Business, The Burial နှင့် The Oppressed တို့သည် left Wing politics နှင့် anti-racism နှင့် အခြားမှာ နိုင်ငံရေးမဟုတ်သော အကြောင်းအရာများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
The white power skinhead ရွေ့လျားမှုသည် ၎င်းသည် Rock Against Communism (RAC) ကိုယ်ပိုင်ဂီတကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် ဂီတဆိုင်ရာနှင့် သုခမမှုဟန်များ Oil သို့ သက်ရောက်စေခဲ့သည်။ သို့သော် Oil ဖြစ်ရပ်နှင့် မသက်ဆိုင်ပေ။ Timothy Si Brown က ရေးသားထားသည်မှာ Oil သည် skinhead ယဉ်ကျေးမှုသည် နိုင်ငံရေး၏သင်္ကေတအခန်းတွင် အရေးပါစွာ တီးခတ်ခဲ့သည်။ ပထမဆုံးပြင်ဆင်ခြင်းသည် skinhead ၏ ဂီတဆိုင်ဗဟိုဖြစ်ပြီး အနက်ရောင်ဂီတဆိုင်ရာဇစ်မြစ်များနှင့် သိသာစွာ ဆက်စပ်နေသည်ဟု ရေးသားထားသည်။ Garry Bushell ဂီတသတင်းစာဆရာ Oi!အမျိုးအစားကို ထောက်ကူအားပေးခဲ့သည်။ ငြင်းခုံခဲ့သည်မှာ အဖြူရောင်စွမ်းအားဂီတဖြစ်ရပ်သည် ကျွန်တော်တို့ထံမှ ထူးခြားခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ Mainstream မီဒီယာသည် တောင်းဆိုသည်မှာ Oi! သည် ၁၉၈၁ ဇူလိုင် ၄ရက်တွင် ၅ရက်တွင် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် Southhall တွင် Hambrought Tavern တွင် တင်ဆက်ပြီးနောက် Oilသည် far-right racist politics နှင့် ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ပြည်သူလူထု ၁၂၀ ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ပြီးနောက် tarvern သည် မီးလောင်ခဲ့သည်။ မဖျော်ဖြေမီ ပရိသတ်အဖွဲ့အဝင်အချို့သည် NF ကြွေးကြော်သံကို ထိုနေရာတဝိုက်တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် အာရှသားလူငယ်များသည် Molotov အရက်ဗုံးများနှင့် အခြားပစ္စည်းများနှင့် tavern သီဆိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်သည့်နေရာကို ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။4Skin နှင့် Last Resort neo-Nazi အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။ ဂီတရွေးပွဲလာသူတို့တစ်ချို့သည် NF သို့မဟုတ် BM ထောက်ပံ့သူများဖြစ်သော်လည်း အဖြူရောင်စွမ်းအားဂီတတီးဝိုင်းများမဟုတ်ပေ။
ပရိသတ်၅၀၀ခန့် Left-wing skinheads, black skinheads, punk rockers, rockabilies နှင့် non-affiliated youth များထဲတွင် ပါဝင်သည်။ ထိုရုန့်ရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခြင်း၏ နောက်ဆက်တွဲတွင် Oi! တီးဝိုင်းများသည် လူမျိုးရေးခွဲခြားရေးဝါဒနှင့် ဖက်ဆစ်ဝါဒကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့သည်။ ၁၉၈၁မေတွင် ထွက်ရှိခဲ့သည့် Strength Thru Oi! ပေါင်းစပ် album ကြောင့် ရပ်ကွက်သားအချို့သည် မည်သည့်အရာမှ အကောင်းမမြင်ခြင်းများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Nazi ကြွေးကြော်သံ "Strength Through Joy" ကို တီးခတ်ခဲ့သည်။ လူမှုရေး အကြမ်းဖက်မှုတွင် ၄နှစ်ခန့်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည် skinhead BM လှုပ်ရှားပြောင်းလဲရေးဝါဒီမှ Nicky Crane ပါဝင်သီဆိုထားသည်။ သူသည် Strength Through Joy album ကို ပြုစုရေးသားခဲ့သည်။ ဖြန့်ချိပြီး နှစ်လအကြာတွင် Daily Mail မှ မြင်သာအောင်ပြသခဲ့သည်။ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒသည် သတင်းစာမှ ဖော်ပြခဲ့သည်။ far-right လှုပ်ရှားရေးဝါဒီ၏ မှားယွင်းချက်ကို ရေးမှတ်ခဲ့သည်။ Oswald Mosley ၏ Blackshirts နှင့် Mussolini ၏ invasion of Abyssinia နှင့် ဒုတိယကမ ္ဘာစစ်မှ Hitler ၏အလျော့ပေးပြီး ကျေနပ်အောင်လုပ်ခြင်းကို ထောက်ခံခဲ့သည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Oi!&oldid=707601" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၂:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။